यी नै हुन् ! बिहानै बसको ठ’क्करबाट ज्यान गुमाएकी २२ वर्षीया कमला देवकोटा’ – Taja Khawar
यी नै हुन् ! बिहानै बसको ठ’क्करबाट ज्यान गुमाएकी २२ वर्षीया कमला देवकोटा’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ १८, २०७८ समय: १८:४९:४४
कैलालीमा बसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिकाको लम्की चो कस्थित टीकापुरतर्फ जादै गरेको ना ६ ८८३३ नम्बरको बसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृ त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीकाअनुसार बसको ठक्करबाट ग म्भीर घा इते भएकी लम्कीचुहा नगरपालिका–१ की २२ वर्षीया कमला देवकोटाको मृ त्यु भएको हो।
अहिले मृ तकका आफन्तले राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। राजगमार्ग अवरुद्ध भएपछि गन्तव्यका लागि छुटेका गाडीहरु ल म्कीमा रोकिएका छन्। ठ क्कर दिने बस र चालक बर्दोगोरिया गाउँपालिका १ का ३१ वर्षीय पुष्प कडेललाई प्र हरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Last Updated on: July 2nd, 2021 at 6:49 pm